SIXIR mise DHUL GARIIR: Maxaa kor u qaaday kubbada ka hor inta uusan Rigoorada Laadin Ronaldo?? – Gool FM
SIXIR mise DHUL GARIIR: Maxaa kor u qaaday kubbada ka hor inta uusan Rigoorada Laadin Ronaldo??
Byare February 15, 2018
(Europe) 15 Feb 2018. Rigooradii uu xalay Ronaldo u dhaliyay Real Madrid Champions League ayaa dood badan ka abuurtay baraha bulshada iyadoo ay dadku la yaaban yihiin waxa kubbada kor u qaaday ka hor inta uusan laadin.
Laacibka reer Portugal ayaa cidiisa u ciidamiyay mar gool lagu lahaa isagoona dhaliyay rigoore lagu galay Toni Kroos iyadoo ayna ugu dambeyn ku adkaadeen 3-1.
Rigooradu waxba kama qaldaneyn sida uu u dhaliyay Ronaldo laakiin waxaa lala yaaban yahay inay kubbadu sare u kacday joog yar ka hor inta uusan laadin.
Baraha Bulshada ayaa aad la isal dhex qaaday Rigoorada Ronaldo iyagoo dadka qaar ay qabaan inay sababtay dhul gariir yar oo ka dhashay garoonka, halka kuwa kale ay qabaan inuu sababay gariir ka dhashay qeylada taageerayaashii soo buux dhaafiyay Bernabeu.
Kuwa kale ayaa qaba inuu Sixir isticmaalay taa oo keentay inay kubbadu yare kor u kacdo inta uusan darbeyn gool ku laadka, halka taageerayasha qaar ay qabaan in xooga uu lugta bidix u soo dhigay dhulka ay sababtay inay kubbada yare kacdo ka hor inta uusan midigta ku laadin.
“Ronaldo wuxuu isticmaalay Sixirka Madoow, si ay kubbada kor ugu kacdo uuna ugu laabo goolka,” qofbaa sidaa ku soo qoray Baraha Bulshada.
Ku kalaa yiri: “Cajiib, Ma wax ayaa jug siyay?.”.
Mid kalaa soo qoray: “Ma jiraa qof kale oo arkay inay kubbadu dhaqaaqday ka hor inta uusan Ronaldo laadin rigoorada. Wax fikirad ah kama heysto maxaa sababay?.
ILLUMINATI CONFIRMED. 😱
— Yoann Arsenal (@YoannArsenal) February 14, 2018
Sawirro dheeraad ah Kullamadii toddobaadkaan horyaalka Soomaaliya
Roma oo shalaay ka taagan qiimihii Mohamed Salah ay uga iibisay Liverpool